Nandray ny Google Street View i Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2016 8:56 GMT
Farihy malazan'i Kyrgyzstan antsoina hoe Issyk-Kul. Sary Google Street View nalaina avy ao amin'ny Kloop.kg.
Izao manaraka izao dia lahatsoratra fiaraha-miombon'antoka avy amin'i EurasiaNet.org. Nahazoana alalana ny famoahana azy eto indray.
Kyrgyzstan no firenena voalohany ao Azia Afovoany nandray ny Google Street View, na dia tsy mila mieritreritra aza ny mpitsidika fa manakaiky kokoa noho ilay tena zavatra ny mpisolo toerana.
Naseho tao amin'ny foibe ara-kolontsaina iray tao an-tanànan'i Cholpon-Ata, izay miorina eo amin'ny farihin'i Issyk-Kul, toeram-panintonana ara-pizahantany ao amin'ny faritra ny tetikasa hanitarana ny Street View (Jery eny an'arabe) ho any Kyrgyzstan.
“Ankehitriny afa-mandray fitetezan-tany manavatsava ny lalana Kyrgyz sy mahita antserasera ireo toerana manintona mpizahatany ny mpiseran'ny Google Maps. Ankoatra ny zavatra hafa dia nandray ny sarin'ny toerana ara-kolontsaina sy manan-tantara miavaka tahaka ny Tilikambon'i Burana, ny riandranon'ny “Ranomason-Jazavavy Tsy Manambady”, ny tendrombohitra masin'i Suleiman-Too (ao Osh) ny teknisianan'ny Google, ary toy izany ihany koa ny Lembalemban'ny Angano (ampitahao amin'Isalo na ny Tsingy), ny petroglyphs (soratra amin'ny vato) ao Cholpon-Ata ary ny toerana hafa,” hoy i Tilik Mamutov, solontenan'ny Google ao amin'ny kaontiny Facebook.
Raha mampidera azy ho fanararaotra mijery an'i Kyrgyzstan avy lavitra, dia nolazain'ny Google fa hampiroborobo ny fizahantany io.
“Afa-mahita ny tobin-dasantsy ianao, manamarina hoe tahaka ny ahoana ny toerana iray. Ary rehefa tonga amin'ny toerana iray ny vahiny mpizahatany dia mety mahita hotely na fandraisambahiny amin'ny findainy,” hoy i Oleg Yakymchuk solontenan'i Google tamin'ny fanamarihan'ny TengriNews.
Mbola mijoro ao Bishkek, renivohitr'i Kyrgyzstan i Lenin. Sary Google Street View nalaina avy ao amin'ny Kloop.kg.
Mety hoe manita-dresaka ihany anefa izany. Tsy masaka loatra ireo toerana fikarakarana sakafo ivelan'ny tanandehibe sy ny lala-masaka, ary karazany tafahoatra ihany izany hoe hametraka lisitra azy ireny ao amin'ny Google Maps (Sarintanin'ny Google). Izay no izy mandra-pisian'ny mpiserasera mametraka karazan-torohay tahaka izany.
Nilaza i Yakymchuk fa nandany herintaona sy tapany ny fametrahana feno ny Kyrgyzstan Street View. Nandaniana roa volana kosa ny nanapihana sary tany amin'ireo toerana an-jatony nasongadina ao amin'ny sarintany ifarimbonana.
Tilikambon'i Burana, iray amin'ireo toerana manatantara vitsy an'i Kyrgyzstan mpirenireny. Sary Google Street View nalaina avy ao amin'ny Kloop.kg.
Mahavariana mazava loatra ny zavabita. Mety ho tsy dia nanahirana loatra ny nanangon-tsary any amin'ireo lalana falehan'ny olona, saingy tsy maintsy nivoaka kely ny lalana ny Google tsindraindray hijery ireo toerana sasantsasany toy ny farihy amin'ny toerana ambony ao Song-Kul.
Nampian'ny governemanta ny Google hamitany ny iraka nataony. Tamin'ny taona 2014, ny Praiminisitra tamin'izany fotoana izany Djoomart Otorbayev nanome baiko fa tokony ampiana ny lisitry ny toerana ampidirina ao amin'ny Street View, fankatoavana miharihary amin'ny mety ho tombony azo amin'ilay fandraisana an-tanana.